लामो आयू कसरी पाउने ? १ सय १७ बर्षकी जापानी महिलाको सुझाव ! तपाई पनि थाहा पाउनुहोस « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ असोज १७ गते शनिवार प्रकाशित
जापानको फुकुओकाकी वसोवास गर्ने एक सय १७ वर्षे केन टानाकालाई गनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डले मार्च ९, २०१९ मा विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध महिला भनी उल्लेख गरेको थियो । उनले कसरी शान्तिपूर्ण जीवन विताउने, कसरी खुसी र सुखी हुने भनी आफ्नो अनुभव सुनाएकी छिन् ।
केनको साधारण तथा प्रभावकारी दीर्घायुको राज भनेकै विहान सबेरै उठ्नु पनि हो । दिउँसोमा समय व्यतित गर्न लागि उनी विभिन्न किताबहरु पढ्छिन् । गणितको अभ्यास गर्छिन् । भन्छिन्, ‘दिमागको विकास गर्नु छ भने हामीले पढ्नै पर्छ ’। त्यसैगरी उनले आफ्नो खुशी र सुखी जीवनको राज आफ्नो ठूलो परिवार भएको बताएकी थिइन् । महत्वपूर्ण कुरा के पनि भने, उनले आफ्नो दीर्घ जीवनको रहस्य जुनसुकै अवस्थामा पनि आशावादी र सकारात्मक हुनु बताएकी थिइन् ।
एक सय १३ वर्षको उमेरमा एक अन्तवार्ता दिने क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘म यति टाढा आइसकेको छु कि अब प्रयास गर्ने अलावा मसँग अरु कुनै विकल्प छैन । म सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु’ । सन् २०१८ मा दिएको अन्तर्वातामा उनले आफु एक सय २० वर्षसम्म बाँच्न चाहेको बताएकी थिइन् ।
केनलाई खेलकुदमा पनि असाध्य रुची छ । उनी आफूलाई सक्रिय तथा समाजमा भिज्न आफु बसोबास गर्ने आराम घरका सहयोगीहरु विभिन्न किसिमका बोर्ड खेल खेल्छिन् । उनको मनपर्ने खेल ओथेलो हो । उनी यसको क्यालिसक बोर्ड गेमको विज्ञ पनि हुन् ।
त्यसबाहेक, केन चकलेट तथा कफी खान्छिन् । त्यसैले त, गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेर्कडको समारोहमा केनलाई धेरै भन्दा धेरै चकलेट प्रदान गरिएको थियो । जुन उनले तुरुन्तै खान सुरु गरेकी थिइन् । जब उनलाई सोधिएको थियो, तपाईं अहिले कतिओटा सम्म चकलेट खानुहुन्छ ? जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘सयवटा’ ।
जनवरी २, सन् १९०३ मा जन्मेकी केन टानाका कुमाकिची तथा कुमा ओटाकी सातौ सन्तान हुन् । हिडेओ टानासित सन् १९२२, जनवरी छ मा विवाह गरे पश्चात्त उनी पाँच सन्तान (चार आफ्नो र एक धर्मपुत्र) की आमा भइन् ।
उनले आफ्नो विवाहकै दिन पहिलो पटक हिडेओ टानाकालाई भेटेकी थिइन् । हिडेओको ‘टानाका मोचिया’ नामक आफ्नै पारिवारिक व्यवसाय थियो । उनी स्टिकी राइज बनाउने र बेच्ने गर्थे, जुन जापानीजको पारम्परिक मिठाई पनि हो ।
दोश्रो सिनो–जापानीज युद्ध ताका सन् १९३७ मा हिडेओलाई आर्मीमा भर्ती हुन भनिएपछि केन आफ्नो पारिवारिक व्यवसायमा सक्रिय हँुदै गइन् । सो क्रममा उनले एक्लै बालबालिकाको हेरचाह गर्नुका साथै हिडेओको आमाको समेत हेरचाह गर्थिन् ।
सन् १९४३ मा केनका छोरा नोबोउ पनि आर्मीमा भर्ती भएका थिए । तर दोश्रो विश्व यु’द्ध पछि सन् १९४७ उनी घर फर्किए । त्यसपछि पनि केनले ६३ वर्षको उमेरमा अवकास नपाउँदासम्म पनि आफ्नै स्टोरमा काम गरिन् ।
केनलाई एक सय ती वर्षको उमेरमा कोलोन क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । यद्यपी, उनी बाचिन् । त्यस्तै, एक सय सात वर्षको उमेरमा आफ्नो अनुभवलाई संगालेर ‘गुड एण्ड व्याड टाइम्स’ नामक किताब लेखेकी थिइन् ।
लामो आयु बाच्नेमा जापान अगाडी रहेकै कारण जापानलाई ‘ल्याण्ड अफ इममोर्टल (अमर भूमि)’ पनि भन्ने गरिन्छ । जापानीजहरु लामो आयु बाँच्नुमा सन्तुलित आहार, स्वस्थकर खानेकुरा र सुधारिएको जीवनशैली मुख्य कारक रहँदै आएको छ । यसबाहेक, जापानको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका कारण पनि त्यहाँका मानिस लामो आयु बाँच्न सफल भएका छन् ।
गत हप्ता अफगानिस्तानमा भएको हिंसामा ३८ जनाको मृत्यु, धेरै घाइते ।